अभिनय गर्न चाहनेलाई नसुरुद्धिन शाहको सुझाव
बिहीबार, २३ कार्तिक, २०७४
एजेन्सी । सबैभन्दा पहिले के अभिनेता बन्नु भनेको भाग्यको खेल हो । अर्थात् भाग्यले गर्दा अभिनेता वा अभिनेत्री बनिन्छ भन्ने सोच फाल्नु जरुरी छ । अर्कोतर्फ केही अभिभावक भेटिन्छन् जो आफ्ना सन्तानलाई सुधार्नको लागि यस क्षेत्रमा जबर्जस्ती धकेलिदिन्छन् । जस्तै कि, उनीहरु भन्छन्, ‘मेरो छोरा वा छोरी बिग्रियो, उसलाई अभिनयमा लगाइदियो भने ब्यस्त बन्थ्यो र सुध्रिन्थ्यो की !’
यस्तो कुरा सुनेर दुख लाग्छ मलाई । म भन्न चाहन्छु कि, कसैलाई एक्टर बनाउने मेरो ठेकेदारी हो र ? आखिर एक्टिङ गर्नका लागि पढाइ जरुरी छैन भन्ने तपाईँहरु किन सोचिरहनुहुन्छ ?
जोसुकै युवाहरु अभिनयमा आउन चाहनुहुन्छ भने पढाइ असाध्यै जरुरी छ । युवाहरुले अभिनयमा आउनुअघि नै पढाइ गर्नु आवस्यक छ । साथै अभिनय त्यसै लहडमा लाग्ने चिज नभएर योजना बनाएर पढेर मात्रै आउने एक पेशा हो ।
मैले त ८÷९ कक्षामा पढ्ने बेला नै आफ्नो अभिवष्यको फैसला गरिसकेको थिएँ । मेरा दुई भाइहरु थिए । एक फौजीमा जान चाहन्थ्यो भने अर्को इन्जिनियर बन्न चाहन्थ्यो । अभिनय मनोरन्जनको कुरा मात्रै नभएर यो अन्य पेशा झैँ मेहेनत गरेर सिकेर लाग्ने पेशा हो । यसमा त्यत्तिकै टेक्निक्स सिक्नु पर्छ जति अन्य प्राविधिक पेशामा चाहिन्छ । जसरी डाक्टर, इन्जिनियर पढेर पेशा अंगाल्छन् नी त्यसै गरी एक्टिङमा पढेर सिक्नु जरुरी छ ।
एक्टिङ त ‘उपरवाला’को देन हो भन्ने कहिल्यै मान्न तयार छैन म । अभिनय गर्नेहरुलाई थाहा छैन कि, हामी कसरी सिक्ने भनेर । यदी राम्ररी सिक्न सकिएन भने मान्छेहरु तपाईँलाई हेरेर हाँस्नेछन् ।
मैले पनि अभिनयबारे अध्ययन गर्दा धेरैले भन्थे कि, एक्टिङमा के छ त्यस्तो पढ्नुपर्ने ? तर म आफ्नै किसिमले पढिरहेँ । मैले नाटक सिकेँ । अभिनय पनि सिकेँ । फिल्मस्टार बन्ने भन्ने मेरो लागि त टाढाको कुरा थियो । त्यसो त मेरो अनुहार पनि त्यस्तो थिएन । खाली म अभिनय चाहीँ गर्थेँ । आखिर म स्टार नभए पनि आफूलाई सुहाउँदो अभिनय त गर्न सक्छु नी भन्ने सोच थियो ।
मलाई यस कामको बारेमा सिक्नु छ, जति सिक्न सकिन्छ भन्ने थाहा थियो । अभिनयमा मैले संघर्ष गरिरहँदा केही फिल्मकर्मीहरु फरक धारको फिल्म बनाउन चाहिरहेका थिए । मलाई के थाहा थियो भने, मेरो अभिनयका लागि सुहाउने किसिमका फिल्म बन्ने क्रममा थिए । फिल्ममा अभिनय गर्नु भनेको स्टार बन्नु मात्रै होइन । यसलाई एकेडेमिक अध्ययन गरी एक पेशाको रुपमा बुझेर लाग्नुपर्ने हुन्छ ।